Ikhaya lelizwe elisetyenziswa nangabanye abantu - I-Airbnb
Ikhaya lelizwe elisetyenziswa nangabanye abantu
Ifama ephakathi kweParis neLille, emaphandleni. Indawo ethe cwaka kakhulu engakhange ijonge.
Indawo yam, endihlala kuyo unyaka wonke, ilungele abantu abathandanayo, abahamba bodwa, abahambi bezoshishino, iintsapho (ezinabantwana), amaqela amancinci.
Umlinganiselo weeYuro eziyi-30 usebenza kwigumbi elinye.
Ukuze ubhukishe, kungcono ukuqhakamshelana nam kwangaphambili ukuze wazi ukuba ayafumaneka na amagumbi.